त्रिविका परीक्षापनि रद्ध, एसईई कै जसरी आन्तरिक मूल्यांकनबाट अंक दिएर नतिजा प्रकाशित जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
सोमबार १५ असार, २०७७
सोलुखुम्बु, सोताङ गाउँपालिकाको सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत तेजिना बस्नेत एसइइको तयारी गरिरहेकी थिइन् । महामारी तनावका बीच पनि उनले आफ्नो तयारी रोकेकी थिइनन् । टेस्ट परीक्षामा आफूले प्राप्त गरेका जिपिएबाट सन्तुष्ट नभएकाले बोर्ड परीक्षामा नतिजा सुधार्न कम्मर कसेकी थिइन् । तर बोर्ड परीक्षा नहुने थाहा पाएपछि उनी निराश छिन् । ‘टेस्ट बिग्रिएको थियो । जानेकै कुरा पनि लेख्न सकेकी थिइन“ । बोर्ड परीक्षामा धेरै अंक ल्याउनका मेहेनत गरिरहेकी थिएँ । परीक्षा नहुने भएपछि जिपिए कम हुने डर छ’, उनले भनिन् ।
आन्तरिक मूल्यांकन प्रणालीले शिक्षकलाई विश्वास गर्ने आधार सिर्जना गरिदिएको शिक्षाविद् वाग्लेको भनाइ छ । ‘शिक्षकलाई विश्वास गरेन भने शिक्षा प्रणाली ध्वस्त हुन्छ । बल्ल शिक्षकलाई विश्वास गर्ने माध्यम बनेको छ । यो मूल्यांकनमा शिक्षक इमान्दार बन्नुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ’, शिक्षाविद् वाग्ले भन्छन्, ‘हाम्रोमा शिक्षकलाई विश्वास गर्ने परिपाटी छैन । पढाउन हुने, जाँच लिन हुने तर उसले दिएको नम्बरमा विश्वास पनि गर्नुपर्छ’, वाग्ले भन्छन् । वाग्लेका अनुसार एसइइमा शिक्षकले ग्रेड चढाउने हुँदा शिक्षकलाई नतिजा प्रकाशनपछि दवाब आउन सक्छ । यदि त्यस्तो हुने अवस्था आयो भने उनीहरूलाई सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने वाग्लको भनाइ छ ।
एसइइमा सधैं आन्तरिक मूल्यांकन गरौं
विद्यार्थीको मूल्यांकन परीक्षाबाटमात्रै हुन्छ भन्ने होइन । उनीहरूलाई अरू प्रोजेक्ट वर्क गर्न लगाएर मार्क दिन सकिन्छ । त्यसको रेकर्ड राम्ररी राखिएको हुनुपर्यो, प्रमाण हुनुपर्यो ।टेस्ट भन्ने बित्तिकै हामी विद्यार्थी जम्मा गरेर जाँच लिने भन्ने बुझ्छौं । तर त्यसो होइन । विद्यार्थी निरन्तर काम गर्र्दै जान्छन्, उनीहरूले गरेको कामको मूल्यांकन हुँदै जान्छ । जसलाई विकासात्मक मूल्यांकन भनिन्छ । मूल्यांकन भनेको कसैको दोष पत्ता लगाउनु हो भन्ने हाम्रो गलत बुझाइ छ ।
फेल गर्ने वा कसैलाई निम्न कोटीको देखाउन मूल्यांकन गर्ने भन्ने मानसिकताले हामी ग्रसित छौं । यसको रुपान्तरण हुन सजिलो छैन । यसको लागि अहिलेको खराब मूल्यांकन प्रणाली नै परिवर्तन आवश्यक छ ।स्कोर मात्र सबै कुरा होइन । अब निरन्तर मूल्यांकन प्रणालीमा जाँदा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गाइडलाइन बनाउन सक्छ । विद्यालयले विश्वसनीय कुरामा परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्छ । हामीले शिक्षकको ‘जजमेन्ट’लाई मान्नुपर्यो । हरेक वर्ष बाहिरकाले जाँच र मूल्यांकन गर्नुपर्ने हो भने त्यो शिक्षा प्रणाली बन्द गरिदिए पनि हुन्छ । एसइइ नगर्दा पहाडै खस्ने पनि होइन । आन्तरिक मूल्यांकनमा कक्षा ८ देखि १० सम्मको असाइनमेन्टलाई लिन सकिन्छ । त्यसको आधारमा ग्रेड दिन सकिन्छ ।परिवर्तन कठिन कुरा हो । परिवर्तनमा अर्थ–राजनीतिको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ । यस्ता निर्णय गराउँदा चुनौती आउँछन् । कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्ष यसमा असहमत भइदिन सक्छ ।
पहिला एसइइ परीक्षा हुँदा शक्ति राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग हुन्थ्यो । सबैको आ–आफ्नो शक्ति हुन्थ्यो । शक्तिमा रिसोर्स पनि जोडिएको हुन्थ्यो । त्यो डाइमेन्सन हराउने भयो । अहिलेको ढिलासुस्ती र आनाकानीमा यसले काम गरेको देखिन्छ । कतै मन्त्रालयको एउटा सेक्सनले काम नगरेको हो कि जस्तो लाग्छ । आफू शक्तिमा बसिसकेपछि निर्णय अड्काउने प्रचलन नौलो होइन । अहिलेसम्म स्कुल वा अभिभावक अन्योलमा पर्नुको कारण यो हुनसक्छ । यो डिसिजन कोभिड–१९ सुरु भएको १० दिनभित्र गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।अर्को पटकदेखि परीक्षा बोर्डले आन्तरिक मूल्यांकनसम्बन्धी तालिम चलाएर शिक्षकलाई कोच गर्ने काम गर्नुपर्छ । र, एसइइमा सधैँ आन्तरिक मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।
मूल्यांकन कसरी ?
आन्तरिक मूल्यांकनको लागि सरकारले कार्यविधि तयार गर्दैछ । टेस्ट परीक्षा वा त्रैमासिक परीक्षाको आधारमा मात्र मूल्यांकन गर्ने कि अन्य आधार पनि समावेश गर्ने भन्ने बारेमा निजी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू अलमलमा छन् । प्याब्सन अध्यक्ष पुरी भन्छन्, ‘स्कुलले लिएको त्रैमासिक परीक्षाको आधारमा मूल्यांकन गरिन्छ होला । त्यो भन्दा अरू विकल्प छैन ।’ तर, केही विद्यालयले टेस्ट परीक्षा नै लिएका छैनन् ।
राष्ट्रसंघको महासभा यस पटक बन्यो अपूर्व महासभा